RW Turkiga oo sheegay in 2,839 xubnood oo askar ah la qabtay kadib afgembigii dhicisoobay - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeWorldRW Turkiga oo sheegay in 2,839 xubnood oo askar ah la qabtay kadib afgembigii dhicisoobay
Raysulwasaaraha Turkiga Binali Yildirim. Sawirka: gettyimages.
Ilaa iyo 2,839 oo askar ah, oo ay ku jiraan saraakiil sare ayaa la xiray, kadib markii ay isku dayeen afgembi kaasoo hadda soo afjarmay, sida uu sheegay Raysulwasaaraha Turkiga Binali Yildirim.
“Waxay ku ahayd midab madow dimuqraadiyada Turkiga” ayuu yiri RW Turkiga.
Ugu yaraan 161 qof ayaa ku dhimatay halka 1,440 kalena ay ku dhaawacantay intii uu socday iskudayga afgembiga fashilmay.
Lama cadayn karo cida ka dambaysay afgembiga.
Ilaa iyo 2,745 qaadi oo Turki ah ayaa shaqada laga cayrshay, sida ay sheegtay warbaahinta dowlada.
RW Yildirim ayaa sheegay in xaalada ay hadda tahay caadi lana soo afjaray iskudaygii dhicisoobay, wuxuu sheegay in dowlada ay hadda dalka gacanta ku hayso.
Sideed kamid ah saraakiisha militariga oo ku lug lahaa afgembiga ayaa diyaarad ugu cararay dalka Greece, iyagoo halkaas ka raadinaya magangalyo siyaasadeed. Greece wuxuu sheegay inuu tixgelinayo codsiga Turkiga uga yimaada ee ah in dib loogu soo cesho.
February 4, 2017 Turkiga oo uga digay Greece dhoolatuska milatari ee gudaha badda Aegean
July 31, 2016 Turkiga oo ilaa iyo hadda ruqseeyay 1,400 oo ciidamada militariga ah
Madaxweynaha Soomaaliya oo gaaray caasimada Rwanda ee Kigali si uu uga qayb galo shir madaxeedka Midowga Afrika